Nolosha Ka Jirta Magaalada Barakeysan Ee Makka, Maalmaha Xajka!! | Baligubadlemedia.com
Nolosha Ka Jirta Magaalada Barakeysan Ee Makka, Maalmaha Xajka!!
Qof kasta oo Muslim ahi,waxa uu ogyahay in ay Makki tahay meesha ugu fadlan badan ee ugu barakeysan dunidan aan ku noolnahay sida uu Qur’aanku inoo sheegay.Magaalada Makka oo ah,meesha uu ku yaallo,(Guriga ilaahay ee Barakeysan),ahna meeshii uu ku dashay “Nabi-Muxamed” NNKH. Waxa sanad walba taga dad Malaayiin ah,si ay u soo gutaan waajibka xajka ee ilaahay Waajibiyey,taas oo ka mid ah; shanta-tiir ee Islaamka.hadaba,Magaalada Makka waxa ay u nooshahay maalmaha xajka si mashuul ah,oo ka duwan sida wakhtiyada caadiga ah,ee bilaha kale ee sanadka.dadka adduunka ka soo xajaaya ee muslimiinta ah,waxa ay soo beegsadaan Magaalada Makka si ay u soo gutaan cibaadooyinka Xajka iyo cumrada sanad walba.maadaamo daafaha
dunida oo dhan dadku ka wada imanayaa,waxa aad dareemaysaa in uu jiro cidhiidhi iyo mashquul badan oo soo waajahaaya magaaladan yar ee barakeysan ee makka.Dadka xujaajta ahi,marka ay ka dagaan magaalada makka,waxayna soo galaan iyaga oo qaadaya ,erayadan(Labaykallaahu mala bayk,Labaynka laa shariika laka labayk,inal xamda wannicmata,laka wal mulk,laa shariika laka)! Waxa lagu dajiyaa hudheelo waaweyn oo fooqo dhaadheer ah,oo dabaqyo faro badan leh,dadka muslimiinta ah,ee xujaajtu marka ay makka oo ah,maagaalo buuro waaweyni ku gadaamanyihiin oo dhagax shiilan oo madow leh,oo jawi kulul ka jiro,waxay dareemaan farxad iyo rajo iyo in ilaahay cagaha u soo saaray meel ay waligood ba ku riyoonayeen in ay u safraan, dawladda sucuudiga oo ah,dawladda arrimaha xajka maamusha waxay u diyaarisay soo dhaweyn wanaagsan iyo waliba adeegyo cibaado oo kala duwan.dadka marka halkaasi hudheeladaasi oo qaar Xaramka ilaahay u dhaw yihiin,waxay u isku diyaariyaan sidii ay u bilaabi lahaayeen cibaadadoodan ay meesha u yimaadeen ee Xajka iyo Cumrada.waxay bilaabaan in ay isnadiifiyaan oo biyaha-diiran ee Makka aad iyo aad ugu maydhaan oo ay iska daahiriyaan daalkii safarka iyo dididkii uu lahaa kuleylka safarkii ay soo mareen. Intaasi ka dib,waxay bilaabaan in ay gudo galaan arrimahan:
· Dawaafka Kacbada ee ku dhextaalla guriga ilaahay.
· Sacyiga labada buurood ee (Safa iyo Marwa) dhexdooda.
· In Maalinta 8 aad ee Xajku bilaabmaayo u boqoolaan dhinaacaas iyo deegaanka (Mina)oo lagu cibaadeysanaayo laba cisho ama seddex cisho.
· Soo tuurashada dhagaxa ama (Dhagax-tuurka) ee looyaqaano(Jamaraadka).
· Xiirashada Timaha iyo Qalitaanka (Hadyiga).
Arrimahaasi oo ah,laf dhabarta Cibaada Xajka ayaa waxay tahay waxyaabaha ay dadka Muslimiinta ahi, ee soo Xajay ku mashquulsanyihiin inta ay joogaan magaalada Makka ee ay ku guda jiraan,Arrimaha xajka.waxyaaba kale ee soo jiidasha leh,ee dadka xujaajta ahi,ku mashquulsanyihiin waxa weeye in ay salaadkasta isku dayaan in ay ku soo tukadaan Masjidka-Xaramka,oo salaadiisu ka fadli badan tahay (1000 salaadood) oo masaajidda kale ah. Waxa wax aad ku soo jiidanaayo ah,oo qiiro iyo qabli-qabowsi bal eh,marka aad Masaajidka ilaahay kula tukaneysid dadka xujaajta ah,ee daafaha dunida ka wada yimid ee kor u dhaafay (Hal-milyan iyo badh ama wax ka badan) oo mar qudha ay salaadda kuwada xidhanayaan(Allaahu-Akbar),mar qudhana ku salaamo nacsanayaan(Asaalaamu-caleymkum…)!!! Dadku way wada fooraraan oo way qiiraysan yihiin oo ilaahay bay gacmaha hoos dhiganayaa oo ay dabi dhaaf weydiisanayaa..dhar isku mid ah,ayaa la wada sitaa!!…rag iyo haween waa lawada cibaadeysanayaa ama waa la dawaafayaa ama waa la suguudsanyahay ama ilaahay baa la baryayaa….ama waa la qulqulayaa oo salaadii baa lagu sii socda ama waa laga sii socdaa ama iyada oo aan la isqoonsaneyn oo la iswada jecelyahay oo la iswada salaamaayo oo dadka ciidamada-ilaalada Xaramku kala horeyso.!! Waxyaabaha aan waligaa xasuustaada ka baxayn waxa ka mid ah,marka aad aragto jawharadda madoow ee dhextaalla Majidka ilaahay ee la yidhaahdo(Kacbada-ilaahay) oo dadku sida shinada ugu meeranyihiin!!! Qof waliba doonaayo in aan cidi ka xigin ama uu soo dhunkado ama soo taabto. Ciroole iyo Carruur lagu lagu dul wareegaayo si aan shanqadh lahayn oo la sunsumaayo..sida daadka oo kale.!! Waxa kale oo aan waligaa xasuustaada ka baxay….cabitaanka iyo goobaha (Biyaha-Samsamka) lagu diyaariyey ee dadka Xujaajtu ka durduuranayaa sida geel dar loo horay!!!!Biyaha-Samsamku waa hadyadda ugu qaalisan ee magaalada Makki la gaar tahay.dawladda sucuudigu waxay xilweyn iska saartay in ay meelkasta oo Masjika Xaramka ka tirsan ka sameyso qasabado laga cabo oo laga dhaansado biyahan barakeysan ee (maa’usamsamka)!! Iyaga oo la qaboojiyey ayaad kaga harraad baxaysaa masjika dhexdiisa iyo hareerihiisaba.!!! Waxa kale oo aadan ilaaweyn marka aad joogto hudheelada la daganyahay ..cuntoonyinka noockasta leh ama khudaarka adduunka oo dhan ka kala yimid ee qofka Xaajiga ahi,heli karo ee uu iibsan karo,iyo waliba sharaabyada kala duwan iyo caanaha maraaciga ah,ee noockasta leh!!! Ugu dambeyntii waxa kale oo aan la ilaabayn….Basanka waaweyn ee dadka salaad walba u qaadaaya dhinaacasi iyo Masjika-xaramka! Waxa kale oo aan la ilaawi Karin samo-falka dadka xujaajta ah,ee isku ehelka ahi,isku sameynayaan iyo farxadda ay wada qaadanayaa…inta la joogo magaalada makka!!waxa kaloo xusid mudan booqasha madiina-almunawarah iyo Masjidkii-Nabiga(NNKH),iyo goobihii dagaaladii islaamku ka dhaceen,sida buurta Uxud iyo qubuurtii-asxaabtii ku shahiiday dagaalkii caanka ahaa,ee(Uxud)!! Socdaal Cibaado oo Ajri badan oo ilaahay lagaga rajeynaayo dambi dhaaf iyo Janno ilaahay ha uga dhigo dadka Xujaajta ah ee Makka u safray iyo kuwa u safri doona!!! Aamiin Allaahow ….Aamiin!!! Ilaahay ha innoo ogolaado in aan marar badan booqanno, Magaalada Barakeysan ee Makka iyo Madiina-almunawarah!!